आजबाट काठमाडौंमा उडान सुचारू? भर्खर आयो यस्तो खबर |
आजबाट काठमाडौंमा उडान सुचारू? भर्खर आयो यस्तो खबर
June 28, 2021 June 28, 2021 adminLeaveaComment on आजबाट काठमाडौंमा उडान सुचारू? भर्खर आयो यस्तो खबर
केहि महिनादेखि बन्द रहेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुचारु भएको छ। सोही अनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान मलेसियादेखि काठमाडौंसम्मको लागि जुन २७ तारिखबाट उडान भर्ने तय भएको समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ।नेपाल सरकारबाट जुन ३० तारिख सम्मका लागि उडान तालिका सार्वजनिक गरिएको छ । जसअनुसार २४ जुनमा नेपाल एयरलाइन्सले कतारको दोहा र टर्कीस एयरलाइन्सले इस्तानबुलबाट उडान गर्नेछभने २५ जुनमा नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जापान जानेछ । सोहि दिन एयर इण्डियाको जहाज दिल्लीबाट काठमाडौं आउनेछ ।*** यो समाचार को पुरा विवरण हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
यो पनि:काठमाडौ । महामारीका कारण लागू गरिएको निषेधाज्ञा अझै पनि जारी छ । सार्वजनिक सवारी साधन संचालन भएका छैनन् । सार्वजनिक सवारी संचालन नहुँदै त्यसो भाडा भने बढाउनुपर्ने निष्कर्ष सरकारी निकायले निकालेको छ । सार्वजनिक वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भाडा बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।
२०६९ सालदेखि वैज्ञानिक रुपमा भाडा समययोजन नभएको उल्लेख गर्दै भाडा बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ब्यवसायीले पनि भाडा समायोजन नगरिएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तेलको मूल्यमा भएको घटबढका आधारमा पटक(पटक भाडा समायोजन भएकाले अब कसरी भाडा समायोजन गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको छ ।*** यो समाचार को पुरा विवरण हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई आयो यस्तो सूचना।सबैले हेर्नुहोला।
तोलामा साढे १६ हजारले घट्यो सुनको मूल्य’ हेर्नुस् कतिमा हुदै छ कारोबार!!
Breaking: देशै भरका कर्मचारीहरुलाई आयो अत्यन्तै डर लाग्दो क्षण।एकचोटी अवश्य हेरेर सतर्क रहनु हुन सबैलाई आग्रह।पूरा पढ्नुहोस्।
रुघाखोकी लागेको छैन भन्दैमा कोरोना लागेको छैन भन्ने कुरामा ढुक्क भएर नबस्नुहोस।अनुसन्धान अनुसार,रुघाखोकी भन्दा अगाडी देखिन्छन यस्ता असर जुन धेरैलाई थाहा छैन,पुरा पढ्नुहोस
सा’वधान!झु’क्किएर पनि यस्ता कुराहरू गुगलमा सर्च नगर्नुहोस्